यिनले गर्दैछन्, फेरि पनि प्रधानमन्त्री ओलीको मृगौला प्रत्यारोपण | Safal Khabar
यिनले गर्दैछन्, फेरि पनि प्रधानमन्त्री ओलीको मृगौला प्रत्यारोपण
प्रधानमन्त्री आज दिउँसो शिक्षण अस्पताल भर्ना हुदैं, बिहान बालुवाटारमा भारतिय चिकित्सकसँग परामर्श
सोमबार, १९ फागुन २०७६, १० : १६
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली दोश्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपणका लागि आज अस्पताल भर्ना हुदैछन् । स्वदेशमै उनले मृगौला प्रत्यारोपण गर्न लागेका हुन् । उनको उपचार स्वदेशी चिकित्सकले गर्छन् की विदेशवाट पनि चिकित्सकहरु निम्त्यााईएको छ ? यो विषयमा आम सर्वसाधारणलाई प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय देखि अस्पताल सम्मले केही बताएका छैनन् । तर उनको उपचारमा विदेशी चिकित्सकलाई पनि नेपालभित्रै निम्त्याएर उपचार हुदैंछ ।
पहिलो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरेका भारतीय चिकित्सक डा. अनन्तकुमार पनि प्रधानमन्त्रीको मृगौला पूनः प्रत्यारोपणमा सामेल हुने उच्च स्रोतले जनाएको छ । ओलीले १३ वर्ष अघि दिल्लीको अपोलो अस्पतालमा पहिलो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गराएका थिए । त्यसबेला चर्चित मृगौला प्रत्यारोपणका चिकित्सक अनन्तले नै उनको मृगौला प्रत्यारोपण गरेका थिए ।
उनी हिजै नेपाल आईसकेको स्रोतले बताएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भारतीय चिकित्सकसहितको नेपाली टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालुवाटारमै पुगेर छलफल गर्दैछ । त्यसपछि उनी दिउँसो अस्पताल भर्ना हुन जाने तयारी छ । पर्सि बुधबार उनको मृगौला पून प्रत्यारोपण गरिदैछ । त्यसका लागि ३१ वर्षिय झापाका एक महिला आफन्तलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
ओलीको मृगौला प्रत्यारोपणका लागि नेपाली चिकित्सकको टोलीमा डा. प्रेम ज्ञवालीको नेतृत्वको टोली पनि हुनेछन् । प्रधानमन्त्रीको निजि चिकित्सक डा दिब्या सिंह, डा अरुण सायमी लगायत पनि टोलीमा सहभागी हुनेछन् । तर यसबारे सम्बन्धित अस्पतालका चिकित्सकहरु र प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले केही बताएको छैन् । ]
उनको उपचार अमेरिकामा गर्ने तयारी यस अगाडी गरिएको थियो । तर लामो समय प्लेनमा बस्नुपर्ने, देशभित्रको राजनीतिक उथलपुथल र कोरोना भाइरसले विश्व आक्रान्त बन्दै जादा हुन सक्ने संक्रमणको जोखिमलाई ध्यान दिएर ओलीको स्वदेशभित्रै उपचारको प्रबन्ध मिलाईएको उनका सचिवालय स्रोतले बताएको छ ।
त्यसका लागि बाहिरवाट चिकित्सक नेपाल ल्याउने र नेपालमै गर्ने गरि तयारी भएको हो । अहिले बिहान हुन लागेको भारतीय चिकित्सक अनन्त सहितको छलफल पछि ओलीको अस्पताल भर्नाको समय टुंगो लाग्ने सचिवालय स्रोतले बताएको छ । उनको अस्पताल भर्नाका लागि सबै बन्दोबस्ती अस्पतालले मिलाईसकेको छ ।
#प्रधानमन्त्री #मृगौला प्रत्यारोपण
प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा माइतीघरमा धर्ना
यस्तो छ नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको अवधारणापत्र (पूर्णपाठ)
सरकारले परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ: उपाध्यक्ष कँडेल
वामदेव गौतमले आज पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानको घोषणा गर्दै
काँग्रेसले गर्यो थप आन्दोलनको घोषणा